I-T3 yaseThanada yeNtlawulo yeSlips - iNkxaso yeTrust kunye ne-Mutual Funds
I-T3 yaseThanada yeNtlawulo yeeNtlawulo zeTrust kunye ne-Mutual Funds Income
Ziyintoni i-T3 Tax Slips?
I-slip yaseThanada yaseThanada, okanye iSitatimende seNkxaso yeNkxaso yeNgeniso, iyakulungiswa kwaye ikhutshwe ngabaphathi bezemali kunye nabaphathiswa ukuba bakuxelele kunye ne-Arhente yeRevenue Revenue Agency (i-CRA) ukuba ingeniso engakanani oyenayo kwi-investments kwimali-mboleko kwiimali ezingabhaliswanga , kwiintlawulo zengeniso yezo shishino okanye imali engenayo kwi-estate ye- tax year .
Abahlali baseQuebec bafumana isalathisi seRelevé 16 okanye iR16.
Umgca wokugqibela weT3 weSlips yentlawulo
Ngokungafani nenye ininzi yerhafu, i-T3 irhafu ayifuni ukuba ithunyelwe kuze kube ngumhla wokugqibela kaMatshi kunyaka emva komhla wekhalenda apho i-T3 yentlawulo ifake isicelo.
Isampula T3 Slip Tax
Isalathisi serhafu yeT3 kwisayithi ye-CRA ibonisa ukuba i-T3 ibonakala njani. Jonga iphepha lesibini (emva kwe-T3 slip) ngolwazi olungakumbi malunga noko kufakwe kwibhokisi nganye.
Ukufakela i-T3 yentlawulo yeThafu kunye ne-Income Tax Tax Return
Xa ufaka iphepha lokubuyisela irhafu yengeniso, faka ikopi nganye yerhafu ye-T3 oyifumanayo. Ukuba ufaka irhafu yengeniso yakho ngenzuzo usebenzisa i- NETFILE okanye i- EFILE , gcina iikopi zakho zerhafu iifayile kunye neirekhodi zakho iminyaka emithandathu xa i-CRA icela ukuba ibone.
Ukulahleka kweT3 Isaphulelo serhafu
Ukuba uthembele okanye uxhasane ngemali engenayo kwaye ungayifumana isalathisi sentlawulo yeT3, qhagamshelana nomlawuli wezemali okanye umphathiswa ukuba uqiniseke ukuba ufumana isaphulelo sakho sentela. Faka ifayile yakho yokubuyisela irhafu ngokukhawuleza ukuba ubalekele izigwebo zokufaka irhafu yengeniso yakho emva kwexesha .
Bala iholo kunye naliphi na ihluthwayo kunye neengxowa-mali ezinxulumene nangoko ungasebenzisa nayiphi na ingcaciso onayo. Faka incwadana negama kunye nedilesi yomlawuli wezemali okanye umphathiswa, uhlobo kunye nenani lentembeko okanye imali yokufumana imali kunye nokuncitshiswa okuhambisanayo, kunye nento oyenzile ukufumana ikopi ye-slip yeT3 ekhoyo.
Faka iikopi zazo naziphi na izitatimenti ozisebenzisileyo ekubaleni ingeniso kunye neencitshulwa zesalathisi seT3 esingekhoyo.
Olunye ulwazi lweRhafu
Olunye ulwazi lwerhafu luhamba luquka:
I-T4A (i-OAS) - Ingxelo yoKhuselo lwabantu abadala
Inkulu yeChord Inversion Lesson Lesson
Uvavanyo lweendandatho zeGolide yeNkokeli e-Lipstick
UFerdinand von Zeppelin
Ziziphi "iiNkonzo ezinxulumene" kwiMfundo ekhethekileyo?
Iintlanzi, ii-Horntails, kunye ne-Woodps
Amanani okuPhuthukisa iiPiyutha
10 iGases eziNgcinileyo zeGreenhouse
Isifundo sabantwana: Omdala iMacDonald wayeneFama